सम्बन्ध बिच्छेद (लघु कथा) | मझेरी डट कम
ks — Sun, 09/02/2012 - 16:04
स्वास्नीसँगको सम्बन्ध बिच्छेदको बारेमा रुद्रमणिले आफैले आफैलाई प्रश्न गर्दै आफै उत्तर दिन थाल्यो । होइन ए रुद्रे ! तैले श्रीमतीलाई मनोरन्जनको लागि सिनेमा देखाउन लागेको थिइस् ? रुद्रेले आफै नरम भाषामा उत्तर दियो, कहिले काही लागेको थिएँ । कुन फिल्म देखाइस् त ? नेपाली सिनेमा माइती घर र परालको आगो । त्यस्ता फिल्मले हुन्छ ? दादा गोद्केले बनाएको यौन आकर्षक र शेखर कपुरद्वारा निर्देशित काम शास्त्र देखाउनु पर्थ्यो । खानपिनको लागि कहिल्यै बाहिर लगिस् ? एक दुई पटक के एफ सी र पिज्जाहट लागें । त्यतिले पुग्दैनथ्यो कान्छा ! नियमित रुपमा लान सक्नु पर्थ्यो । घरमा के काम सघाउँथिस् ? सबै गर्थ्ये.....घर धन्दा, कपडा धुन, यति सम्म कि उसका पर सरेका दिनका कपडा पनि धुने गरेको थिएँ । त्यसले केही पनि हुदैन थियो । वासिंग मेसिन किनेर राख्नु पर्थ्यो । गर-गहनाहरु के के दिइस् त ? सामान्य एक सरो । ए त्यतिले हुन्थियो है ! रुद्रे जंगियो र भन्यो के मेरो कपाल खौरिएर दिनु त ? मेरो औकात त्यति नै थियो । फेरी नरम भएर “सेतो हात्ती” पाल्न सकिदैन भन्ने जानी जानी किन ल्याइस् त बाबै ? मैले ल्याएको होइन, उसले आफै आउँछु भनेकी हो ।
आई फोन, ब्ल्याक बेरी किनेर दिइस् त ? के को पैसाले दिनु ? नोकियाको राम्रै वाईफाई भएको सेट दिएको थिएँ । त्यतिले मान्दैन हौ लाटा ! तँसँग कार त थिएन होला ? थिएन । मोटर साइकल थियो ? अहँ थिएन । के थियो त ? एउटा पुरानो एटलसको साइकल थियो । ए ! तँ अघि अघि बसेर किर्लिंग किर्लिक्ग घन्टी बजाउदै साइकल चलाउने बुढी पछि बस्ने होला है ? उसको साथी भाइका अगाडि इज्जत थियो कि थिएन ? यी सबै कुरा पुर्याउन नसक्ने भए किन आगोमा हात हालिस् त भाइ ? के त्यसका सबै चाहना पूरा गर्न मैले आफ्नो मृगौला बेचौ ? रुद्रले एक पटक जोडसँग भित्तामा मुड्की बजारेर थुइक्क गर्दै थुक्यो । ए केटा ! शान्त शान्त भन्दै आफैले आफैलाई समाल्यो । तैले उसलाई एक्लो हुदाँ मन बहलाउन नदिन कुनै किताब किनेर दिइस् कि ? हो दिएको थिएँ । बि पि कोइरालाको हिटलर र याहूदी अनि तसलिमा नसरिनको लज्जा भन्ने उपन्यास ......यी किताबमा के छ र ? युधिर थापाको झरनाको मिठो पानी र सलमान रुस्दीको सटेनिक भर्शेस पो दिनु पर्थ्यो त ! अनि गीत सुन्नको लागि नि ? सूर्य थुलुंगले गएको ”मागी मिठो खादैन,चोरी राम्रो लाउदैन’ र नेपाली हो बीर झुक्दैन यो शिर भन्ने गीत दिएँ...... त्यस्ता गीतमा कसैको मन बहलाउदैन साथी आजकल ! आतिश असलमले भेडाको स्वरमा गाएको गीत र साकिराले गएको “ओक्का ओक्का” भन्ने गीत पो हुनु पर्थ्यो त । यो पनि दिइन, ऊ पनि दिइन, यसो पनि गरिन, उसो पनि गरिन भन्छस् । जागिर कसरी खाइस् त ? लोक सेवा पास गरेर । लोक सेवा त पास गरिछस्, तर स्वास्नी खुशी राख्न यति ठूलो अग्नि परिक्षा पास गर्नु पर्दैनथ्यो ? अरु के कारणले छोडी होलि त तेरी श्रीमतीले ? रुद्रमणिले विचार गर्यो । उमेरको दश वर्ष फरक थियो, पढाइमा ऊ एम ए पास थिई, रुद्रमणि स्नातक मात्र, रुपमा ऊ राम्री थिई । ऊ कूल घराना कि थिई, रुद्रमणि गरिब घरको । ऊ आधुनिक विचारकी, रुद्रमणि पुरातनवादी सोचको । ऊ ह्रिस्ट पुस्ट थिई, रुद्रमणि शारीरिक दूर्बलताले खाइसकेको थियो । उसको र रुद्रमणिको प्रकृति पूर्व र पश्च्चिम जस्तो फरक, राजनीतिक विचार धारा पनि अलगै .....उसले यिनै कुराहरुको निचोड निकाल्दै भन्यो, अनि अडिन्छे तेरी स्वास्नी.... ? .गरी नि सम्बन्ध बिच्छेद !!
एकदेव — Sun, 09/02/2012 - 18:00
ठिस बुढा — Wed, 09/05/2012 - 18:45
सम्बन्ध बिच्छेद... अनि तितो सत्य ।
मिठो, दमदार, रोचक...